Faroole oo Muqdisho kusoo Wajahan Iyo Madaxwaynaha Cusub oo Awood lagu saarayo inuu Magacaabo Ra’izul Wasare Kasoo Jeeda Deegaanada Puntland - iftineducation.com
Faroole oo Muqdisho kusoo Wajahan Iyo Madaxwaynaha Cusub oo Awood lagu saarayo inuu Magacaabo Ra’izul Wasare Kasoo Jeeda Deegaanada Puntland
aadan21 / September 14, 2012
Faroole iyo Gaas
iftineducation.com – Xili dhawaan Magaalada Muqdisho ay ku doorteen Baarlamaanka Somaliya Madaxwayne Cusub oo 4sano ee soo socota Haga Dalka ayaa hadana waxaa looga fadhiyaa inuu dhawaan soo magacaabo Raizul wasaare ay isla shaqeeyaan.
Madaxwaynaha Mamul Goboledka Soomaliyeed ee Puntland Dr C/rixmaan Faroole oo kamid ah Siyaasiyiinta ugu tunka Wayn dalka Somaliya ayaa la filayaa inuu dhawaan soo gaaro Magaalada Muqdisho Halkaasi oo ka bilaabi doono Olole uu ku doonayo in Raizul wasaare kasoo jeeda Deegaanada Puntland magacaabo Madaxwaynaha Cusub.
Madaxwayne Faroole ayaa Safarkiisa waxaa ku wehelinaya Siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda Deegaanada Puntland kuwaasoo uu doonayo in Madaxwaynaha Cusub kasoo doorto qofka uu ka dhigayo Wasiirka Koowaad ee Xukuumada Federaalka Soomaliya ee looga fadhiyo Madaxwayne Xassan Sheekh.
Dr Faroole ayaa warar hoose oo Faafin Media heshay Sheegayaan inuu Saacadaha fooda Nagu soo hayo soo gaari doono Muqdisho wuxuuna Faroole kamid ahaa Siyaasiyiin dhowra oo isku dhaceen Madaxwaynihii hore ee Soomaliya, waxaana shacabka Soomaliyeed sugayaan Raizul wasaare Cusub.
Illo ka agdhow Faroole ayaa noo xaqiijiyay inuusan kamid ahayn Madaxwayne Faroole raga uu wado Raizul wasaarihii Xukuumadii KMG ahayd ee waqtigeedu dhamaaday Cabdiwali Maxamed Cali Gas.
Kooxda Anonymous oo jabsatay Emailka Madaxweynaha cusub kana heshay Ra’isulwasarahiisa iyo Sir culus.
Banaan baxyo loogaga soo horjeedo Maraykanka oo ka socda dalal badan oo Islaam ah